InFrame - ဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာ & ဓာတ်ပုံဘောင် | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ဓါတ်ပုံပညာ Apps ကပ » InFrame - ဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာ & ဓာတ်ပုံဘောင်
InFrame - ဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာ & ဓာတ်ပုံ Frame က APK ကို
တစ်ဦးကချောမွေ့စွာ instagram Blur နယ်စပ်ရေးရာနှင့်အပြည့်အဝလုပ်ဆောင်ချက်များကိုနှင့်အတူအဘယ်သူမျှမသီးနှံဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာ app ကို!
အများကြီးအံ့သြဖွယ် effect နှင့် filter တွေနဲ့တစ်ဦးကအလွန်ပြည့်စုံသောဓာတ်ပုံတစ်ပုံအယ်ဒီတာ app ကို!
အကြီးအ collage စေရန်တစ်ဦးကနေရာလေးကို collage ထုတ်လုပ်သူ! InFrame အများအပြားအံ့သြဖွယ် effect နှင့် filter တွေနဲ့အခမဲ့အားကောင်းတဲ့ဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာပါ! Instagram photo editor ကိုအဘယ်သူမျှမသီးနှံ - ဒါဟာအကောင်းဆုံးဓာတ်ပုံတည်းဖြတ် apps များထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
* ဤမျှလောက်များစွာသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများ, စတစ်ကာများနှင့်သင့်ဓါတ်ပုံလျှောက်ထားရန် features တွေရှိပါတယ်! ကအခမဲ့ကအကောင်းဆုံးဓာတ်ပုံတစ်ပုံအယ်ဒီတာဖြစ်ပါတယ်။
* ရုပ်ပုံ Editor ကိုဖွင့်တဦးတည်းကိုနှိပ်လိုက်ရုံဖြင့်အဘယ်သူမျှမသီးနှံဓာတ်ပုံကို Instagram ပေးပါသည်။ ဒါဟာ photo-editing app များကိုများအတွက်အကောင်းဆုံး instagram မျှသီးနှံ App ဖြစ်ပါတယ်။
သင်၏ဓါတ်ပုံများအနုပညာလက်ရာများတူအောင်လုပ်ဖို့လက်ရာမြောက်သောဘောင်၏တန်ချိန် + ။
+ One-ကိုထိပုတ်ပါအော်တိုမြှင့်တင်ရန်။ ထို့အပြင် InFrame gamma ဆုံးမခြင်း, အလိုအလျောက်ဆနျ့ကငျြဘ, အလိုအလျောက်သေံ, မှုန်ဝါး, ထက်မြက်, ရေနံသုတ်ဆေး, ပုံကြမ်း, အနက်ရောင် & အဖြူမြင့်မားသည့်ယှဉ်, Sepia နှင့်ထို့ထက် ပို. အပါအဝင်သင်၏ဓါတ်ပုံများများအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ၏ကြီးမားသောအမျိုးမျိုးပေးထားပါတယ်။ ဒါဟာအကောင်းဆုံးဓာတ်ပုံတစ်ပုံအယ်ဒီတာဖြစ်ပါတယ်။
+ အရောင်ညှိသက်ရောက်မှု add, လှည့်, သီးနှံဆိုဒ်ပြောင်းရန်, ဘောင်, ကိုယ်ပွားများနှင့်သင်၏ဓါတ်ပုံများပေါ်ဆွဲ
+ Amazing ဓာတ်ပုံ filter များနှင့်အမှန်တကယ်အချိန်အတွက်ဆိုးကျိုးများလျှောက်ထား
တည်းဖြတ်စရာသီးနှံဓာတ်ပုံကို Instagram ထုတ်လုပ်ဖို့ + One-ကိုထိပုတ်ပါ။ photo-editing များအတွက်အကောင်းဆုံး instagram မျှသီးနှံ app ကို။
+ အရောင်ချိန်ခွင်လျှာ, အရောင်ညှိနှိုင်းမှုရွေးချယ်စရာ hue, saturation ဆန့်ကျင်ဘက်များနှင့်အရောင်အဝါတို့ပါဝင်သည်။
အရောင်ဒဏ်ငွေ-tuning ခွင့်ပြု + Curves interface ကို
+ ရောင်ခြည်ဆန့်ကျင်ဘက်အရောင်အပူချိန်များနှင့်ရွှဲ Adjust
+ Sharpen နှင့်မှုန်ဝါး
+ အလွယ်တကူထိနဲ့ဖြစ်တော့-to-zoom ကို interface ကိုအတူတည်းဖြတ်
+ အရောင်အပူချိန် ( "နွေးထွေးမှု")
+ အရောင် splash
+ Instagram ကိုအယ်ဒီတာ
+ အာရုံစိုက် (စောင်း Shift)
စာသားသို့မဟုတ်ရုပ်ပုံများကိုထည့်သွင်း + ရေးဆွဲခြင်း mode ကို, - ရုပ်ပုံလွှာ frames များကိုအတူဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာစာသားကိုအရေးအသား
ထိုကဲ့သို့သောစတာတွေက e-mail ကို, Picasa, Facebook, Twitter, Instagram ကို, အဖြစ်လူမှုရေးကွန်ယက် + Share,
သင့်ရဲ့ပြခန်းရန်သင့်နောက်ဆုံးရလဒ်သိမ်းဆည်းပါ။ ထိုကဲ့သို့သော e-mail,, Picasa, Facebook, Twitter Instagram ကိုအဖြစ်သင့်ရဲ့ device ပေါ်တွင်န်ဆောင်မှုမဆို အသုံးပြု. သင်၏ဓါတ်ပုံများ Share, ဒါမှမဟုတ်ဘာပဲခွဲဝေမှုနည်းလမ်းကိုသင်ကြိုက်တတ်တဲ့။
အရောင် Adjust, သက်ရောက်မှု add, လှည့်, သီးနှံဆိုဒ်ပြောင်းရန်, ဘောင်, ကိုယ်ပွားများနှင့်သင်၏ဓါတ်ပုံများပေါ်ဆွဲပါ။ InFrame ကကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံနှင့်မသီးနှံဓာတ်ပုံကို IG ထုတ်ပေး, ချောမွေ့စွာ instagram နဲ့ပေါင်းစပ်ပြီး။ Instagram အဘယ်သူမျှမသီးနှံ photo-editing app များကိုအကောင်းဆုံးဓာတ်ပုံတည်းဖြတ် apps များ။
အဆိုပါလွယ်ကူသော touch နှင့်အဖြစ်တော့-to-zoom ကိုအင်တာဖေ့စကရိုးရှင်းပြီးသင်၏ဓါတ်ပုံများနှင့်အတူဆော့ကစားနှငျ့သငျခွငျးငှါအလိုရှိအတိအကျကြည့်ရဖို့ကိုမှန်ကန်စေသည်။ သင့်ရဲ့ပြခန်းနှင့်ကင်မရာကိုကနေဓါတ်ပုံတွေကို Edit ။
InFrame ပျော်စရာနှင့်အစွမ်းထက်ဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာအခမဲ့သင်လျင်မြန်စွာဖြတ်တောက်ပေးနိုင်ပါတယ်ကြောင်း, လှည့်နှင့်ဒဏ်ငွေ-ညှိမဆိုရုပ်ပုံဖြစ်ပါတယ်။
collage option ကို Add
InFrame - ဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာ & ဓာတ်ပုံဘောင်
9.50 ကို MB
InFrame Inc က
quick Grid - ...
pic ပြခန်း - ...
နှုတျခမျးမှေးဓာတ်ပုံ Editor ကို
ချိုမြိန် Selfie Lite ကို ...
Logo Maker၊ Logo ဒီဇိုင်း၊ ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်း